Yahuuda: “Sucuudiga Ma Ogola In La Ogaado Xiriirka Uu Nala Leeyahay” – Shabakadda Amiirnuur
November 20, 2017 5:03 am by admin Views: 169
Iyadoo la ogsoon yahay in dowlado badna oo carbeed ay xiriir wada shaqeeneyd la leeyihiin maamulka Yahuuda ee xoogga ku heysta dhulka Barakaysan ee Qudus, ayaa haddana waxaa jirta in maamulkaasi uu daaha ka rogay siro badan oo xiriirkaasi ku saabsan. Wasiirka Tamarta maamulka Yahuudda ninka lagu magacaabo Yofaal ayaa sheegay in maamulka Yahuuda uu xiriir wanaagsan la leeyahay dowlado badan oo carbeed oo uu ku jiro maamulka Aala-Sucuud.
Waraysi uu siiyay idaacadda ku hadasha afka ciidankooda ayuu ku sheegay in dowlado badan oo Carbeed ay Yahuuda la leeyihiin xiriir wanaagsan iyo wadashaqeyn toos ah, isagoona intaa ku daray in dowladahaas Carbeed ee Aala-Sucuud ay ku jiraan aysan jecleyn in xiririirka ay la leeyihiin Yahuudda la ogaado, iyaguna ay arintaas ku ixtiraameen.
Wuxuu sheegay in Yahuuda aysan wax dhib ah u arkin in la shaaciyo cilaaqadaas jirta, balse wuxuu sheegay in saaxibadoodu ay culeys u arkaan, iyaguna ay la qaateen in la qariyo. Maamulka Aala-Sucuud ayuu ku tilmaamay inuu yahay maamul wanaagsan oo dhex-dhexaad ah, islamarkaana kaalin wanaagsan ka qaatay la dagaalanka waxa uu ugu yeeray Argagaxisada.
Hadalka wasiirkan ayaa imaanaya iyadoo dhawaan taliyaha ciidamada Yahuudda oo waraysi siiyay warbaahin ku taalla dhulka Xarameynka uu sheegay in Yahuudda ay kala shaqeyneyso Aala-Sucuud ka hortaga awooda sii baaheysa ee dowladda Iiraan. Mas’uuliyiin farabadan oo katirsan Aala-Sucuud ayaa booqasho sir ah waxay ku tageen dhulka Yahuuda xooga ku heysato, waxaana dadkaas kamid ah dhaxal-sugaha koowaad ee Aala-Sucuud ahna wasiirka gaashandhiga maamulkaas.